I-Crosscall Core-T4 ithebhulethi yomhlaba wonke [Uphengululo] | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | 28/03/2021 10:00 | Ukuhlaziywa ukuba 31/03/2021 12:45 | ngokubanzi, Reviews
Sibuyela kwiActualidad Gadget enomxholo owuthandayo, kunye nohlalutyo olulungileyo ukuze uzenzele isigqibo sokuba kufanelekile ukuthenga iimveliso ezithile, kwaye ngeli xesha sigxile kwintengiso ekhethekileyo, yezixhobo enganyangekiyo kuzo zonke iintlobo zeendawo, ungaphoswa.
Entsha ifika kwitafile yethu yokuhlalutya I-Crosscall Core-T4, ithebhulethi enzima kakhulu, igcwele izixhobo kwaye ngaphezulu kwako konke kukunganyani. Fumanisa nathi ukuba zeziphi ezona mpawu zinomdla kwaye ukuba kufanelekile ukuthenga olu hlobo lweemveliso ezijolise ekuchaseni nasekuzinzeni, ucinga ntoni?
Njengakwamanye amaxesha, sithathe isigqibo sokukhapha olu hlalutyo lutsha kunye nevidiyo oya kuthi uyonwabele kwisitishi sethu seYouTube kwaye ikhokele olu hlalutyo. Kuyo uyakufumana unboxing kwiThebhulethi yeCroscall Core-T4, Kunye noluhlu lweemvavanyo ezithile esizenzayo ukuze ufumane umbono wokusebenza kwayo ngokubanzi, kuba kulula kakhulu ukuyibona ngamehlo akho kunokuba uxelelwe ngayo. Ungalibali ukubhalisa kwaye usishiyele ukuthanda ukusinceda siqhubeke nokukhula.
1 Uyilo olucingelwe ukumelana nalo
3 Icandelo leMultimedia kunye neekhamera
4 Izibonelelo zesixhobo seCrosscall kunye nokuzimela
Uyilo olucingelwe ukumelana nalo
Ngokwendlela yoyilo, iCroscall inelayini eyomeleleyo eyenza ukuba sive ukuba zithini na iimveliso zayo, kule meko iCore-T4 ibingazukuncipha, kwaye inemigca ebonakalayo, ngakumbi ukuba siyayithelekisa nezinye iimveliso ze ikhamera. Sinoyilo oluxubeneyo olubandakanya izinto zentsimbi kunye neeplastikhi eziqinileyo nezitshintshayo ezisinika ukhuseleko olongezelelekileyo. Ngale ndlela uzuza Isatifikethi se-IP68 ngokungangenisi manzi ngokuchasene nokuntywiliselwa ukuya kuthi ga kwi-2m imizuzu engamashumi amathathu, kunye nokutywina okupheleleyo ngothuli.
Ubunzima: I-610 gram
Ubungakanani: 225 x 135 x 14mm
THENGA iCrosscall Core-T4 entsha ngexabiso elifanelekileyo
Ngaphambili sinayo Iglasi yeGorilla 3, okusinika uxhathiso olwamkelekileyo lokwahlukana. Njengoncedo sinesakhelo esibalaseleyo kunye neglasi ethe tyaba ngokupheleleyo. Uvavanyo lwayo lokuvavanywa luqinisekisa ukumelana eziphakamileyo 1,5 yeemitha kumgangatho wekhonkrithi nakwithiyori evela kuzo zonke iiengile. Ngokufanayo, amaqondo obushushu agqithisileyo phakathi kwe -25-kunye + 50º awuyi kuchaphazela ukusebenza kwawo ngokubanzi. Ukongeza, iyamelana nemvula kunye namanzi anetyuwa, ilungile, umzekelo, ukuba isetyenziswe njengeGPS kwisikhephe. Ngaphandle, kubonakala ngathi akukho nto isweleyo, kodwa ... yintoni le ihlala ngaphakathi kuyo? Makhe sijonge.
Enye yezinto ezakusothusa kakhulu yile ubunzima bayo obukhulu Ukujonga ukudibana kwesixhobo, kodwa ucinga ukuba kugxile kunyamezelo, akusothusi nathi.
Ngokuphathelele kumqhubekekisi, kwakhona sifumana apha mhlawumbi elinye lawona manqaku alo kunye ne-RAM, yiyo loo nto ukubheja kweCrosscall kuluhlu lokufaka kunye IQualcomm Snapdragon 450, ubuncinci, ewe, abakhange babheje kwiMediaTek. Imemori i-ram eya kuhamba nale processor yile 3GB, nangona singenayo idatha ngqo ngohlobo lwememori esetyenzisiweyo.
Kwinqanaba lokudityaniswa sinezibuko IYIMBINI oko kuyasivumela ukuba sisebenzise iCrosscall T4 njengesixhobo esisesona kuphela. Kwimeko apho sinonxibelelwano 4G LTE Ngokugubungela ngokwaneleyo kuhlalutyo lwethu. Sinelinye icandelo elishiye kubanda kakhulu, kwaye sinalo Imveli ye-ac WiFi kunye neBluetooth 4.1.
Ukugcinwa kwe32GB kuyandiswa yi-microSD ukuya kuthi ga kwi-512GB
I-A-GPS, iGlonass, iBeidou kunye noGalileo
Njengenzuzo, sinayo NFC ke sinokusebenzisa neendlela zokuhlawula ngaphandle konxibelelwano, kunye nezibuko I-USB-C, esingakhange sikwazi ukuthatha ividiyo kwiimvavanyo zethu. Ngokwenxalenye yayo, sinee-headphone ezifakwe kwiphakheji nakwizibuko I-3,5mm jack.
Icandelo leMultimedia kunye neekhamera
Sinepaneli 8 intshi IPS LCD ngesisombululo seWXGA, ngentla ngentla kwe-HD kwaye ngaphandle kwe-HD epheleleyo, into ethathela ingqalelo ubungakanani besikrini kunzima ukuyiqonda. Ewe, iphaneli inikezela ngokuqaqamba okuphezulu kokukhanya kunye nemibala ehlengahlengiswe kakuhle, nangona kunjalo, isisombululo esingezantsi kwe-FHD kwisixhobo seli xabiso siyaphikisana. Isandi senxalenye yaso silungile xa sijonga isithethi saso kuphela esisezantsi. Yithenge ngexabiso elifanelekileyo kwiAmazon ukuba sele ikuqinisekisile.
Ngokuphathelele kwiikhamera esine5MP ngaphambili, ngaphezulu ukwanela ukubamba umnxeba wevidiyo kwindawo eqhelekileyo, nakwikhamera engemva sine-13MP yokusetyenziswa gwenxa, ukusebenza kusezantsi kwiimeko zokukhanya ezibi kwaye inesicelo sekhamera elula, sikushiya iisampulu:
Fumanisa iinkcukacha zendlela ezihamba ngayo kwividiyo> Qhagamshela kwi-INSTAGRAM YETHU
Oko kwathethi, amava e-multimedia kunokuthiwa anele, kodwa kucace gca ngokungabinaso isandi sestiriyo kunye nokusonjululwa okuphantsi kwescreen sayo, ngaphandle kokuqaqamba kwaye inokuzonwabisa ngaphandle ngaphandle kwengxaki.
Izibonelelo zesixhobo seCrosscall kunye nokuzimela
Kule meko, iphakheji ibandakanya i-X-Blocker ngasemva iadaptha ehambelana nefayile ye Isinxibelelanisi semagneti ye-Crosscall X-Link. Sinebhetri ye I-7.000 mAh ngaphandle kokutshaja ngokukhawuleza, ibonelela ngaphezulu kokuzimela ngokwaneleyo ekusebenziseni kwesiqhelo kunye nokonwabela umxholo wemultimedia ngaphandle kweengxaki ezigqithileyo.
Sigxininisa kule mveliso njengakuyo yonke i-Crosscalls amandla ayo amangalisayo "ongekho sendleleni", Awusoze ufumane isixhobo esichaseneyo nesichaphazeleka ngakumbi kunye neziqinisekiso ezinikezelwa yiCroscall. Nangona kunjalo, njengesiqhelo kolu hlobo lwemveliso, sithintele kakhulu ukujonga ixabiso, siphosa ubuncinci isisombululo se-FHD kwiscreen, ukugcinwa okungaphezulu kwe-32GB ebonakala incinci kakhulu kunye ne-3GB yayo emfutshane ye-RAM.
Ikwabandakanya i-X-Strap: soloko ugcina ithebhulethi yakho ikufutshane. Umtya wegxalaba, owenzelwe ukulungisa ithebhulethi ye-CORE-T4, ikwaxhotyiswe ngesiphatho esijikelezayo esingu-360 ° esenzelwe ukuqhelana nakho konke ukusetyenziswa kwexesha kwaye ke oko kunciphisa nawuphina umngcipheko wokwenzakala. Ukongeza, enkosi ngokungatyibiliki kunye nomtya onephedi, unxibe kakuhle ibhegi yeX-STRAP yonke imini.
Ungathenga iCrosscall Core-T4 entsha ukusuka kwi-519,90 i-euro kwiwebhusayithi yayo esemthethweni, okanye uthathe ithuba lesaphulelo esibonelelwe kwiAmazon apho ungayifumana khona ukusuka kwi-471 nje LE LINK. Siyathemba ukuba uluthandile uhlalutyo lwethu kwaye usishiyela nayiphi na imibuzo kwibhokisi yezimvo, apho siya konwaba ukukuphendula.
Ithunyelwe nge: 28 Matshi we2021
Utshintsho lokugqibela: 31 Matshi we2021
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Crosscall Core-T4 i-tablet yeendawo zonke [Uhlalutyo]